Isu tiri vanodyidzana nevatengi vedu kubva pekutanga kuonana kusvika mushure mekutengesa-sevhisi.Semuongorori wehunyanzvi, tinokurukura zvinodiwa nevatengi vedu uye nekugadzira mhinduro dzinowedzera kugona uye kuwedzera-kukosha.Pamwe pese - ISO 9001 yakasimbiswa process chain - isu tinopa yakanyanya kunaka mhinduro package.
Tinogara tiri munzira.
Bhizinesi rakapasa chitupa cheGB / T29490 bhizinesi rekuchenjera pfuma manejimendi system.
"Kiyi tekinoroji, midziyo yakakwana uye kushandiswa kwechitsuwa / shore yakavakirwa yakakwirira-simba yakakosha magetsi system" yakahwina mubairo wakakosha weChina muchina indasitiri yesainzi uye tekinoroji mubairo.
Iyo yekugadzira patent "chishandiso uye nzira yekuona isina musono switch ye inverter grid yekubatanidza / off grid" yakahwina mubairo weChinese patent Kunaka.
"Kiyi tekinoroji uye kushandiswa kweMW yakakosha converter magetsi eCoastal Engineering" yakahwina mubairo wekutanga wepasirese wesainzi uye tekinoroji kufambira mberi mubairo.
Bhizinesi rakanzi "standardized good behaviour demonstration enterprise".
Bhizinesi rakapasa "ISO18001 Occupational Health and Safety Management System"
Bhizinesi rakapfuura "gjb9001b weapon equipment quality management system certification"
Bhizinesi rakawana "rezenisi rekutsvagisa nekugadzira rezvombo nemidziyo yesainzi" rakapihwa neState Administration yesainzi, tekinoroji uye indasitiri yekudzivirira yenyika.
Bhizinesi rakanzi "Guangdong Intellectual Property Demonstration Enterprise".
Iyo inozivikanwa se "nhatu-nhanho yekuvanzika qualification unit" neGuangdong mauto zvakavanzika Qualification Certification Committee.
Chiratidzo chakanyoreswa chebhizinesi chakaverengerwa se "Chiratidzo chinozivikanwa cheChina";
Bhizinesi rakasarudzwa se "national innovative pilot enterprise".
Bhizinesi rakapihwa zvakare zita re "kiyi yepamusoro-tech bhizinesi renyika Torch Plan".
Bhizinesi rakanzi serimwe remakumi mashanu "mabhizinesi ekumusana ezvigadzirwa zvekugadzira indasitiri muGuangdong Province".
Bhizinesi rakapihwa zita re "advanced bhizinesi muGuangdong Province".
Iyo yekugadzira patent yakakwirira-simba isingapindike magetsi ekupa yakahwina "China Patent Goridhe Mubairo".
Bhizinesi rakagadzwa sechikamu chekuita che "unterruptible power supply sub Technical Committee yeNational Power Electronics Standardization Technical Committee".
Bhizinesi rakarongwa seAAAA "yakajairwa maitiro akanaka bhizinesi".
Postdoctoral research workstation yakavambwa.
EPS zvigadzirwa zvemagetsi zvekukurumidzira zvakaverengerwa se "akakurumbira mhando zvigadzirwa zveGuangdong Province".
Iyo kambani inozivikanwa se "Guangdong yakavanzika sainzi uye tekinoroji bhizinesi" uye "Guangdong yakakwira-tech bhizinesi".
Pamusoro peDET POWER